शनिबार, १४ असार
अमृत वाणीको सँगालो धम्मपद . १४ असार २०७६
'घुम्तीमा नआऊ है, आँखा तिमी जुधाउन !' संख्याभन्दा पनि गुणात्मकतामा विश्वास गर्ने थापाका गीतमा कोमलता र कवितामा कठोरपन पाइन्छ । जुन उनको सिर्जनात्मक विशेषता हो । १४ असार २०७६
सेतीको आँसु जननीमाथि खुलेयाम आक्रमण वा बलात्कार हुँदा एक सुपुत्रले कसरी सहन सक्छ ? हो, म त्यही पीडा भोगिरहेछु । पीडाबीच आक्रोश उब्जिरहेछ । १४ असार २०७६
कानूनमा भीमार्जुन, संगीतमा अर्जुन मिलन हरेक बिहान घरको माथिल्लो तलामा सात नबज्दै उक्लन्छन् । जहाँ हार्माेनियम, तबला, गितार, मादल र बाँसुरीलगायत थुप्रै वाद्यवादनका सामग्री छन् । सुरुमा हार्माेनियम समाएर रियाज गर्न थाल्छन् । अनि, संगीतका विभिन्न धुनमा मन्त्रमुग्ध हुन्छन्, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अर्थात् गीतकार एवं संगीतकार अर्जुन मिलन । १४ असार २०७६
उपेक्षामा ‘किसान शहीद’ भीमदत्त भीमदत्त पन्त, नेपाली किसान आन्दोलनका शहीद । अहिले उनको योगदानलाई उपेक्षा गरिएको छ । १४ असार २०७६
राष्ट्रिय कविता महोत्सवका उत्कृष्ट दुई कविता १४ असार २०७६
नाम मात्रको लोग्ने ! १४ असार २०७६
भीरमा सरकार ! भीमकाय चट्टानी पहाड । पहाडको फेदमा बगिरहेछ, ब्रम्हायणी नदी । पहाडको बीचमा पहरो काटेर बनाइएको सानो बाटो, त्यो पनि पैतला आधा मात्रै अट्ने ! थोरै रड्कियो भने ब्रम्हायणीमा पुगिन्छ । १४ असार २०७६
माया एन्जेलोको आत्मकथाः संघर्ष र साहसको दस्तावेज माया एन्जेलो अमेरिकी अश्वेत लेखिका हुन् । एन्जेलोले थुप्रै किताब लेखेकी छन् । तर, मलाई उनको बहुचर्चित ‘आत्मकथा शृंखला’ खुब मन पर्छ । १४ असार २०७६
रत्नपार्कमा ठडिएर काठमाडौंलाई हेर्दा ! म युरी गागरिन अर्थात् पहिलो अन्तरिक्ष यात्री । रुस र अमेरकाबीच शीतयुद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला विश्व समुदायले पहिलो अन्तरिक्ष यात्रीको रुपमा मलाई पायो । अमेरिकासँग हरेक विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्ने होडमा रुसले मलाई अन्तरिक्षमा पठायो । र, म पहिलो अन्तरिक्ष यात्री बन्न सफल भएँ । १४ असार २०७६
‘ड्याडी, म त फेल भएँ’ एकजनाले भन्यो, ‘फेल भयाे हाे ?’ म फेल ! विश्वासै लागेन तर अब गर्नैपर्ने स्थिति आयो । दुईजना साथी फर्स्ट डिभिजनमा पास, म खुसी छैन । भर्खर एसएलसी दिएका केटा देख्दा जसले पनि सोध्ने, 'के भयौ ?' . १४ असार २०७६